Nijanona ny iraky ny Chang'e-5 sinoa ...
Hatramin'ny 1976, ny santionan'ny vatolampy volana voalohany niverina teto an-tany dia nidina. Tamin'ny 16 Desambra, ny sambon-danitra Chang'e-5 any Shina dia namerina fitaovana manodidina ny 2 kilao taorian'ny fitsidihana haingana ny fizotry ny volana. Nidina teny amin'ny volana ny E-5 tamin'ny 1 Desambra, ary niainga indray tamin'ny 3 Desambra. Ny habaka ...
Heweiyongtai dia miseho ao amin'ny EUROSATORY
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 18-06-11
Heweiyongtai dia miseho ao amin'ny EUROSATORY 11-15 jona 2018, ny Eurosatory biennial dia nanana ny fanokafana marika tao amin'ny Centre Nord Villepinte Exhibition Center. Ekipa mpivarotra varotra iraisam-pirenena any Heweiyongtai dia mandray anjara amin'ny fampirantiana ary mampiseho ny sasany amin'ireo solontenantsika ...
Heweiyongtai & «Salon de l'industrie de police» ...
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 18-05-15
Nanomboka ny 8 ka hatramin'ny 10 Mey 2018 (3 andro ny fitambarany), ny SOFEX faha-12 (fampirantiana ny hery miasa manokana sy ny kaonferansa) dia natao tao amin'ny ivon-toeran'ny fampiratiana Amman miaraka amin'ny fanohanan'ny mpanjakan'i Jordania tanteraka. Beijing Heweiyongtai Sci & Tech Co., Ltd amin'ny maha ...
Heweiyongtai nanatrika serivisy fiarovana faha-16 any Azia ...
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 18-04-16
15-19 aprily, 16th Defense Services Asia Exhibition & Conference 2018 nosokafana tamim-pahatokisana tao Kuala Lumpur, Malaysia. Beijing Heweiyongtai Sci & Tech CO., Ltd, amin'ny maha mpanamboatra matihanina fiarovana fitaovana manokana azy, dia mandray anjara amin'ny fampirantiana ...
Fiarovana iraisam-pirenena & Fihaonambe IDEX 201 ...
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 17-12-13
Beijing Heweiyongtai Sci & Tech Co., Ltd dia nanatrika ny faha-13 an'ny International Defense & Conference IDEX 2017, ny ABU DHAB-UNITED ARAB EMIRATE, ny trano heva misy anay dia 12-A41. Nasehonay ny rafitra fitsirihana x-ray azo entina, EOD Jammer, detector explosive azo entina ary ny sasany efa mandroso poli ...
Beijing Heweiyongtai Sci & Tech Co., Ltd at ...
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 16-11-18
Beijing Heweiyongtai Sci & Tech Co., Ltd dia nanatrika ny fiarovam-pirenena Iraisam-pirenena faha-9 momba ny fiarovana sy seminera IDEAS 2016 Pakistan. Nasehonay ny rafitra fitiliana taratra x-portable, EOD Jammer, ny detector explosive azo entina ary ny fitaovan'ny polisy hafa efa mandroso. Eks ...
Fitaratra fitiliana fiara, Rafitra fizahana fiara fitaterana finday, Rafitra fitiliana fiarovana X-Ray azo entina, Masinina scanner X-Ray azo entina, Scanner X-Ray Portable, Fakan-tsary fakan-tsary,